Nandresy teny amin’ny fitsarana ny TGV/Mapar : nahantona ny fandrarana hetsika nataon’ny prefektioran’i Mahajanga | NewsMada
Nandresy teny amin’ny fitsarana ny TGV/Mapar : nahantona ny fandrarana hetsika nataon’ny prefektioran’i Mahajanga
Mbola resy hatrany indray ny fanjakana. Nametraka fitoriana fangatahana fampiatoana ny didim-pitondrana noraisin’ny prefektioran’i Mahajanga ny eo anivon’ny TGV/Mapar, afakomaly. Nahazo rariny izy ireo, omaly antoandro, rehefa namoaka ny didiny ny eo anivon’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana (Taf), Mahajanga, fa mihantona avy hatrany izany fandrarana ny hetsika rehetra navoaka izany. Nialoha izany anefa, efa nametraka ny sakana rehetra tamin’ny alalan’ny Emmo/Reg nanerana ireo toerana maromaro eto Mahajanga ny eo anivon’ny OMC. Anisan’izany ny manoloana ny lapan’ny Tanànan’i Mahajanga. Nisy Emmo/Reg koa ny teny amin’ny toerana manokana “voirie” eo Marolaka, nikasana hanaovana ny hetsika rehefa nandrangaranga fandrarana hetsika ankalamanjana, nialoha ny didin’ny Taf ny mpitondra.
Ambivitra ny tsy nifampikasihan-tanana
Efa tonga hatrany amin’ny fifanosehana sy fifampihantsiana aza izany teo amin’ny mpitandro filaminana sy ireo depiote raha nikasa ny hivoaka ny lapan’ny Tanàna izy ireo, nefa nosakanana. Tsy nanaiky izany anefa ireo olom-boafidy ireo fa nivoaka ihany. Ambivitra ny tsy nisian’ny fifampikasihan-tanana. Nihemotra rahateo ny Emmo/Reg, ka afaka nandeha ireo depiote. Nitohy tamin’ny diabe namakivaky ny tanàna izany ary narahina fanentanana ny vahoaka ho eny amin’ny seranam-piaramanidina Amborovy, hitsena ny filohan’ny Tetezamita Rajoelina, izany. Nitarika izany ireo depiote Mapar ampolony, narahin’ny vahoaka marobe. Nanaraka akaiky izany diabe nampisehoan’ny Mapar ny heriny izany ary nitandro ny filaminana sy nijery ny mety ho fihoaram-pefy ny Emmo/Reg. Nisy hatrany koa anefa ny fanakisahan’ny mpitandro filaminana ireo nivorivory teny amin’ny manodidina ny lapan’ny Tanàna. Nivezivezy amin’ny toerana hafa koa izy ireo. Na izany aza, tsy nisy ny fanapoahana baomba mandatsa-dranomaso. Efa hita taratra koa anefa fa efa nivonona amin’izany ny eo anivon’ny Emmo/Reg.
Naneho ny fahendreny sy ny filaminany ny TGV/Mapar ary i Mahajanga
Nilamina amin’ny ankapobeny ny teto Mahajanga. Nampiseho ny fahaizany milamina sy ny fahendreny rahateo ny mpomba an-dRajoelina sy ny Mapar ary ny vahoaka.
Araka izany, mbola mitohy hatrany ny fanitsakitsahana lalàna ataon’ny fitondrana. Tsy voahaja ny tany tan-dalàna ka tsy mahagaga raha tonga any amin’ny gaboraraka ny firenena. Resy lava eny amin’ny fitsarana ny fanjakana noho ny kitoatoa sy ny tsy fahaiza-mitantana. Tokony hampandinika izany satria tsy vao voalohany. Resin-dRavalomanana hatrany teny amin’ny fitsarana izy ireo amin’ny fikasana hanao hetsika tahaka itony. Tahaka ny teo Mahamasina sy ny tany Toamasina ny taona 2017. Miseho indray izany taty Mahajanga. “Tokony horavaina ny fitsarana satria tsy ilaina raha tahaka izao hatrany”, hoy ny mpikamban’ny CSM, Fanahimanana Tiaray, tao amin’ny tambajotran-tserasera.
Iraka manokana aty Mahajanga, Synèse R.